Ukwesomakhonya uNdongeni kwezamankomane - Bayede News
Home » Ukwesomakhonya uNdongeni kwezamankomane
Ukwesomakhonya uNdongeni kwezamankomane
INingizimu Afrika izobe imelwe uXolisani “Nomeva” Ndongeni emqhudelwaneni oconsisa amathe iWorld Boxing Super Series (WBSS) okuzokhishwa kuwo umakhonya esisindweni seBantamweight emhlabeni jikelele. KuWBSS, esungulwe uWilfries Sauerland waseGermany noRichard Schaefer waseSwitzerland, kuqhathwa osomankomane abayisi-8 abangompetha bamabhande eWorld Boxing Council (WBC), i-International Boxing Federation (IBF), iWorld Boxing Association (WBA) neWorld Boxing Organisation (WBO). Bakhiphana ukwazi kuze kugcine sekusele ababili abalwela ukukhombisa ukuthi ubani umakhonya kuleso sisindo esisuke siqhathiwe. IWBSS yokuqala yaqhathwa ngowezi-2017 kanti kwakukhiphana ukwazi ompetha besisindo iCruiserweight neSupermiddleweight. Obashaya bonke emakhanda kuWBSS uhlabana ngomgqomo wenkomishi eqanjwe ngenkakha eyayingumpetha womhlaba kosondonzima uMuhamad Ali nesizumbulu sezigidi ezili-$10.
Usomankomane waseJapan, uNaoya Inoue, ophethe amabhande eWBA Super nele-IBF, uzoqhuthana nompetha weWBO uJohn Riel Casimero wasePhillipines. Ozonqoba uzohlabana ngalezi zinto ezibalwe ngenhla. Le mpi ibekelwe umhla zingama-25 kuMbasa eMandalay Bay Casino, eLas Vegas, e-USA. UNdongeni, owake waba umpetha we-IBO neWBF Lightweight, uqhathwe empini ezobhulela amazolo le mpi enkulu ka-Inoue noCasimero. Lo somankomane akadinge kugqugquzelwa ukuthi kumele ashaye esinenkosi phakathi ukuze ahehe iso labaqhathi baphesheya. Empini yakhe yokugcina ese-USA wahlulwa ngamaphuzu uDevin Haney ngoMasingana wangonyaka odlule embangweni wamabhande eWBC neWBO Inter-Continental Lightweight.
NjengoHaney, uBarboza Junior uthishwa yizingqapheli zase-USA njengompetha womhlaba wangomuso, okuchaza ukuthi kumele uNdongeni aqaphele. UNdongeni, osahlulwe kanye ezimpini ezingama-27, uthola le mpi nje, kwaba nokudumala ezweni ngesikhathi umkhaya wakhe wase-Eastern Cape, uZolani Tete ephoqeleka ukuphuma kusemi-final yeWBSS ngenxa yokulimala. Kwakumele akhiphane ukwazi noNonito Donaire owayephethe isicoco seWBA. Impi yayihlelwe e-USA ngoMbasa wonyaka odlule. UTete ugcine ukubonakala eringini ephucwa ibhande leWBO uCasimero eBirmingham, e-England, ngoZibandlela. Washaywa ngomcacamezelo womlalisaphansi ngomzuliswano wesithathu. Kuzo ezithinta lo mdlalo, kubukeka indlala bezoyizwa ngendaba abalandeli njengoba kungenzeka kube nemiqhudelwano emibili.
Izindlela zizohlukana njengoba abanye bezobamba umgwaqo owuthelawayeka uN2 beqonde eMandeni lapho u-Ayanda “Nyamazane” Mthembu ezovikela isicoco seWBF Middleweight esitheni esingakaqinisekiswa. Lo mqhudelwano uhlelwa iLudonga Boxing Promotions esiwe ivuka isikhathi noMthembu osebuya ngisho naseGoli ukuyozama inhlanhla. Labo abahlala naseduze kweTheku bazothi “shot left” belibhekise eChatsworth lapho uZonke Sibiya weDMZ Promotions eqhathe amabhokisa asathuthuka. Kuputshuka lezi zindaba zokuqhathwa kwale miqhudelwano nje, abalandeli basaphuza amatiye ngezinga elibonakale emqhudelwaneni obuseGlencoe, eDundee, ngempelasonto edlule. Ngenyanga ezayo kulindeleke amabombo abheke eMpangeni njengoba intaka izobe ibekelwe amazolo eMfolozi Casino. Umpetha weWBA Pan African, uNkululeko “Bulldog” Mhlongo, uzovikela okwesibili leli bhande ku-Augustine Motata waseDemocratic Republic of Congo.